Dib U Soo Celinta: Sida Si Toos Ah Loogu Sameeyo Dukaankaaga Shopify ama Shopify Plus Store | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 9, 2021 Khamiista, Diseembar 9, 2021 Douglas Karr
Labadii toddobaad ee u dambeeyay waxa ay ahaayeen kuwo wax soo saar leh oo leh macmiilka wershadaha moodada oo aanu u furayno goob toos ah oo macaamiisha ah. Kani waa macmiilkii labaad ee aanu ka caawinay Shopify, kii kowaad wuxuu ahaa adeeg diris.
Waxaan ka caawinay macmiilkan inuu dhiso oo calaamadeeyo shirkad, horumarinay wax soo saarkooda iyo istiraatiijiyadooda suuqgeyn, dhisnay kooda Ka adeegso dukaameeyaha goobta, oo lagu daray ERP-gooda (A2000), isku dhafan Klaviyo fariimaha SMS-ka iyo iimaylkayaga, isku-dhafka miiska caawinta, dhoofinta, iyo nidaamyada cashuuraha. Waxay ahayd hawl aad u badan oo horumarineed oo loogu talagalay sifooyin gaar ah oo goobta oo dhan ah.
Shopify waa nidaam aad u ballaaran, oo leh astaamo POS, dukaan khadka ah, iyo xitaa wax iibsiga mobilada ee loo maro app-ka Dukaankooda. Waxaa la yaab leh, in kastoo, xitaa Shopify Plus - xalkooda ganacsi - ma haystaan ​​kayd toos ah iyo soo kabasho toos ah! Waad ku mahadsan tahay, waxaa jira madal cajiib ah oo si buuxda isku dhafan iyada oo loo marayo Shopify App kaas oo daryeelaya kaydintaada maalinlaha ah ee adiga… waxaa la yiraahdaa Rewind.
Dib u celi Shopify Backups
Dib-u-celinta waxaa aaminay in ka badan 100,000 oo hay'adood horeyba waana adeegga ugu horreeya ee kaydinta ee Shopify. Tilmaamaha iyo faa'iidooyinka waxaa ka mid ah:
Kaydi Bakhaarkaaga - Wax walba kaydi, laga bilaabo sawirada alaabta gaarka ah ilaa xogta badan ilaa dukaankaaga oo dhan.
Badbaadso Waqtiga iyo Lacagta - Gacan ku kaydinta CSV waa waqti badan oo adag. Dib-u-celinta waxay si toos ah u kaydisaa xogtaada, iyada oo siinaya badbaadada xogta-set-it-and-forget-it.
Soo Celinta Xogta Muhiimka ah Daqiiqado gudahood – Ha u ogolaan khilaaf software, abka buggy, ama malware-ka inay ku cunaan xariiqdaada hoose. Dib-u-celinta waxay kuu ogolaanaysaa inaad dib u dhigto khaladaadka oo aad si degdeg ah ugu soo noqoto ganacsiga.
Taariikhda Nooca Fartaada – U hoggaansan oo u diyaarsan hanti dhawr. Nabadda maskaxda iyada oo loo marayo kaydin xog sugan oo otomaatig ah ayaa faa'iidada tartanka u leh baahidaada ganacsi.
Sida loo kabsado Shopify Backups
Waa kan muuqaalka muuqaalka goobta.
Xogtaada si otomaatig ah ayaa loo kaydiyaa oo si ammaan ah ayaa loo xafidaa… taasi waa qiimaha aanad ku dhejin karin qiimo. Dhab ahaantii, qiimaha Rewind waa mid aad u fiican. Dib-u-celinta waxay ilaalin doontaa kayd joogto ah, oo ay ku jirto xogta badan. Ku soo celi wax kasta oo hal sawir ah dukaankaaga oo dhan - si fudud u dooro taariikhda markii wax walba ay shaqeeyeen, oo garaac soo celiyo!
Iyadoo Rewind, waxaad dooran kartaa taariikhda aad ku soo celinayso mawduucaaga, blogyada, ururinta caadadaada, macaamiisha, boggaga, alaabta, sawirada alaabta, ururinta smart, iyo / ama mawduucyadaada.
Bilaw 7 maalmood oo tijaabo ah oo dib u dabaysha oo bilaash ah
Daah-furka: Waxaanu nahay xidhiidhiye Rewind, Soo iibso, Iyo Klaviyo oo aad isticmaaleyso xiriiriyeyaashayada xiriirka ee maqaalkan.
Tags: gurmadBackup Shopify blogkaydinta dukaamaysigaBackup Shopify imagesBackup Shopify alaabtadukaanka kaydka shopifyBackup Shopify themesida loosida loo kaydiyo Shopifysida loo kaydiyo Shopify plusdib u noqodukaankaKa adeegso dukaameeyaha